Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh oo si deg deg ah ugu baxay magaalada Addis Ababa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh oo si deg deg ah ugu baxay magaalada Addis Ababa
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay ka amba-baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona kusii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeyb gali doonna shir madaxeedka Midowga Afrika oo maanta ka furmaya magaalada Addis Ababa, waxaana hore halkaasi ugu sugnaa wafdi kale oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda C/salaan Hadliye Cumar.
Shirka Midiwga Afrika oo kusoo beegmay xilli ay Soomaaliya galeyso doorashada madaxweynaha oo dhaceeysa 8-da Febraayo ee sanadkaan ayaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin, hiigsiga horumarineed ee qaarada Afrika ee 2063, doorashada guddoonka Midowga Afrika oo dadka sanadkaan u sharaxan ay ka mid tahay wasiirada arrimaha dibada ee Kenya Aamina Maxamed, wuxuuna shirkaan socon doonnaa muddo labo maalmood ah.
Dhinaca kale, safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Addis Ababa ayaa soo afjareeysa warar maalmihii ugu dambeysay la isla dhex maraayay oo ahaa inuu Soomaaliya shirkaasi u mateli doono wasiirka arrimaha dibadda C/salaan Hadliye Cumar.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in magaalada Addis Ababa uu kulamo kula qaato qaar ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Afrika ee halkaasi u tagaya ka qeyb galka shirka maanta ka furmaya.